About Us - Chengdu Yixinhe Import sy ny varotra mpiara Export., Ltd
Chengdu Yixinhe Import sy ny varotra mpiara Export., Ltd Faritany Pujiang, Chengdu, faritanin'i Sichuan, China.We no mirotsaka amin'ny voankazo Import sy ny fanondranana ny varotra nandritra ny taona maro.
Ny lehibe indrindra dia ahitana vokatra cirtus voankazo, Kiwi voankazo, Actinidia ssp, tantely pomelo, ratsy tarehy Zavatra voasary, Ehime Mandarin Orange etc.We manokana mba hanome "mahasalama, mahasalama sy matsiro" voankazo mba ho fitantanana ny orinasa. Ny vokatra dia hita amin'ny alalan'ny fahefana departemanta sy mahafeno ny fenitra iraisam-pirenena ny vokatra fambolena tsena.
Amin'izao fotoana izao, ny orinasa manana feno sy fitantanana tsara Siantifika system.With ny fahatsoram-po sy hery, tsara kalitao, ny vokatra dia be ekena sy natoky ny industry.We mampanantena ny hanome anao ny tena voa ambongadiny prices.We takatry ny mifikitra amin'ny fitsipiky ny "Quality aloha, fanaovana ny marina toy ny base" ary hanokana ny tena mba hanangana ny fanentanana ny orinasa sy hampiroborobo ny fampandrosoana ny vokatry orinasa ao Shina.
Tonga soa namana avy amin'ny manerana izao tontolo izao tonga mitsidika, manome tari-dalana ary iaraho midinika cooperation.We mitady fatratra mamorona raharaham-barotra mahomby ny fifandraisana amin'ny mpanjifa vaovao manerana izao tontolo izao amin'ny ho avy.